पोषणका विषयमा शिक्षित र अशिक्षित दुवै अनविज्ञ छन्ः बोनिता शर्मा | Kendrabindu Nepal Online News
पोषणका विषयमा शिक्षित र अशिक्षित दुवै अनविज्ञ छन्ः बोनिता शर्मा
३ कार्तिक २०७६, आईतवार १५:३९
काठमाडौं । बीबीसीले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने विश्वका प्रेरणादायी तथा प्रभावशाली एक सय महिलाको सूचीमा नेपालकी बोनिता शर्मा परेकी छन् । ‘सोचाई’ संस्थामार्फत पोषणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी बोनिता सन् २०१९ का लागि उक्त सूचीमा परेकी हुन् ।
पृथ्वी, ज्ञान, नेतृत्व, रचनात्मकता, खेल तथा परिचय गरी ६ विधामा बीबीसीले हरेक वर्ष एक सय महिलाको सूची सार्वजनिक गर्दै आएको छ । द सोसल चेन्जमेकर्स एण्ड इनोभेटर्सकी संस्थापक बोनिताले यस्तो सम्मान कसरी पाइन् ? सोचाई के हो ? जस्ता विषयमा केन्द्रबिन्दुकर्मी कृष्णसिंह धामीले संस्थापक शर्मासँग कुराकानी गरेका छन् ।
‘बीबीसी हन्ड्रेड वुमेन’ मा छानिँदा कस्तो लाग्यो ?
‘बीबीसी हन्ड्रेड वुमेन’ भनेर छान्नु र त्यसमा आफू पनि परेको थाहा पाउँदा एकछिन त मलाई हो कि होइन जस्तो लागेको थियो । ‘लिस्ट’ आएपछि त्यसमा अरू को–को परेका छन् भनेर हेर्दा जुन जुन महिलाहरूलाई मैले आइडल मानेर कामहरू गरिरहेका हुन्थेँ, उनीहरू पनि थिए ।
महिलाहरू विविध विधामा सूचीकृत भएका थिए । त्यसमा हाम्रो टिमले गरेको कार्यक्रम थियो । विशेषगरी इनोभेसनको हिसाबमा । त्यसलाई आधार मानेर ‘ज्ञान’ विधामा पर्दा पहिला एकदम सक्ड भएँ, पछिचाहिँ एकदम खुसी लाग्यो ।
‘सोचाइ’को सोच के हो ?
यसको सोच युवाद्वारा नेतृत्व गरेर हाम्रो समाजको स्वास्थ्य र पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउने हो । विशेषगरी कुपोषणलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्य वा सोच हो ।
‘सोचाइ’को अवधारणा कसरी आयो ?
‘सोचाइ’मा चारजना संस्थापक छौँ । चारैजना विविध फिल्डबाट थियौं । म पब्लिक हेल्थ न्युट्रेसन, नेहा मल्ल फार्मेशी न्युट्रेसन, आशुतोष मिडिया र मञ्जिता सोसल वर्कको हुनुहुन्थ्यो । हामी डाइभर्स क्षेत्रबाट आएका युवाहरू समुदायमा जाँदा हामीले देखेकै घटना, हामीले सुनेकै घटनाले चाहिँ हामीलाई यो समस्याको समाधान गर्नु जरुरी छ भनेर झकझक्याएको थियो ।
विशेषगरी हाम्रो नजिकैको समुदाय, जस्तो म काठमाडौंमा जन्मिएँ, यही नजिकैको एरियामा पोसिलो खानेकुराबारे थाहा नभएर, उहाँहरूलाई विभिन्न किसिमको विभेद भएर, गरिबीको कारण, अशिक्षाको कारणले अकालमै महिला दिदिबहिनी र बच्चाहरूले ज्यान गुमाइरहेको अवस्था देखेपछि त्यसको समाधान गर्नैपर्छ र हामी युवा भएर केही नयाँ गर्न सक्छौं भन्ने अठोट र जोस थियो । त्यही जोसलाई अगाडि बढार सोचाइको सुरुवात गरिएको हो ।
बीबीसीले तपाईले गरेको कुन कामबाट प्रभावित भएर यस्तो सम्मान दिन पुगेको हो ?
बीबीसीले छनोट गर्दा क्रिएटर, आर्टिस्ट, साइन्टिस्ट, राइटर, फाइटर, स्पोर्टसजस्ता विविध विधाकेन्द्रित व्यक्तित्वहरूलाई सँमेटेको थियो । त्यस्तै विविध विधामध्ये म चाहिँ ज्ञान विधा अन्तर्गत इनोभेटर भनेर छनोट भएकी थिएँ । त्यसमाथि पनि यो वर्षको थिमचाहिँ ‘फिमेल इज फ्युचर’ अर्थात् ‘महिलाहरू नै भविष्य हुन्’ भन्ने थियो । अझै पनि हरेक पावर र पोजिसनको नेतृत्व पुरुषहरूले नै गरिरहेका छन् ।
महिलाहरूले के के नयाँ काम गरिरहेका छन् त ? के के योगदान गरिरहेका छन् त ? भन्ने कुराको छनोट गर्दा हामीले गरिरहेको काम बीबीसीको छनोटमा पर्‍यो । हामीले ३/४ वर्षदेखि निरन्तर यहि क्षेत्रमा लागिराखेका छौं । त्यसैले यो सम्मान दिइएको जस्तो लाग्छ ।
सोचाइले उत्पादन गरेको पोषण र महिनावारी माला के हो ? जसले तपाईलाई यो सम्मान प्रदान गर्न सहयोग गर्यो ?
समाजमा गरिबीले वा खाना नपाएर मान्छे कुपोषित हुन्छ । तर, कुनै ठाउँमा यस्तो अवस्था पनि छ जहाँ चाही के खानुपर्छ भन्ने कुरा थाहा नपाएर पनि कुपोषित भइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्था देखिसकेपछि के माध्यमबाट त्यस्ता आमाहरूलाई जानकारी दिन सक्छौं त ? कसरी स्तनपान गराउने ? कतिपटक गराउने ? कहिलेसम्म गराउने ? स्तनपानबाहेक बच्चालाई के के खुवाउने ? जस्ता जानकारीलाई एउटा साधारण तरिकाबाट कसरी दिन सकिन्छ भनेर हामीले विभिन्न फिल्डमा प्रयोग गरिरहँदा पोषणमाला भन्ने आइडिया आयो ।
पोषणमालामा २१ वटा फरक फरक प्रकारका दाना हुन्छन् । जसमा अंकहरू छन् । ०, ६, ९, १२ र २४ । त्यस्तै विभिन्न रंगहरू छन् । हरेक कुराको अर्थ छ । सुनौलो हजार दिनमा बच्चा पेटमा भएदेखि दुई वर्षसम्मको अवस्थामा बच्चाको दिमागको ८० प्रतिशत विकास हुने भएकाले यो समयमा बच्चालाई राम्रो स्याहार दिन सकियो, पोषण दिन सकियो भने पछि गएर ऊ एउटा स्वस्थ्य मानिस हुनसक्छ भन्ने अवधारणाका साथ माला बनाएका थियौं ।
सोचाइले विकास गरेको पोषण र महिनावारी माला । तस्बिरः दिपेन्द्र रायमाझी/केन्द्रबिन्दु ।
यस मालामा अंकले बच्चाको उमेर बुझाउँछ । त्यस्तै रंगले खानाका विविध परिकार बुझाउँछ । जस्तै सेतो भनेको आमाको दूध । खैरो भनेको अन्न बाली । पहेलो भनेको दाल गेडागुडी । हरियो भनेको सागसब्जी र फलफूलहरू र निलो भनेको पशुजन्य आहार बुझाउँछ ।
० देखि ६ बीचमा एउटा मात्र सेतो रंग भएकाले जन्मेदेखि ६ महिनासम्म आमाको दूधमात्र खुवाउने भन्ने बुझिन्छ । ६ महिनापछि पास्नी गरिन्छ । र कतिपय आमाहरूले बच्चालाई दाल र भात मात्र मिचेर खुवाउने गर्छन् । भनेपछि बच्चाले त्यहाँ भिटामिन, प्रोटिनहरू पाइरहेको हुदैन । त्यसैले त्यो सबै कुरा मिलायो भने सन्तुलित आहार हुन्छ र बच्चालाई अगाडि बढ्न आफ्नो शारीरिक, मानसिक रूपमा तन्दुरस्त हुनको लागि चारै किसिमका खानेकुरा मिलाएर खानुपर्छ भन्ने म्यासेज यस पोषणमालाले दिन्छ ।
अर्को महिनावारी माला चाहिँ के हो ?
मालासँगै दिइने अर्को पोषण कार्डले कतिपटक खुवाउने ? कसरी खुवाउने ? कति मात्रामा खुवाउने भन्ने जानकारी हुन्छ । त्यससँगै अर्को महिनावारी माला छ । महिनावारी हुने किशोरी तथा महिलाका लागि कहिले महिनावारी हुन्छ ? डिम्बासयबाट कहिले डिम्ब निष्कासन हुन्छ ? गर्भवती हुने सम्भावना सबैभन्दा बढी कहिले हुन्छ ? भन्ने कुरा यो मालाले बुझाउँछ । यसमा २८ वटा दाना छन् । जसले हरेक महिनाको २८ दिन बुझाउँछ भने त्यसमा झुण्ड्याइने हात्तीले आफु जुन दिनमा छुँ त्यसको संकेत गर्छ । यसलाई सार्न सकिन्छ ।
महिनावारी हुनु भनेको अछुत हुनु हो भन्ने रुढीवादी जनविश्वास अझै छ । धर्मसँग जोडिने भएकाले गाउँ मात्र नभएर सहरमा पनि महिलाहरू यसका कारणले पीडित छन् । किशोरीहरूलाई महिनावारीको बेला आइरनयुक्त खाना चाहिने बेला अछुत जस्तो व्यवहार गरिन्छ ।
त्यस्ता गलत धारणा तोड्नको लागि पनि यो मालाले सहयोग गर्छ । यो नर्मल कुरा हो है, तिम्रै शरीरभित्र हुने कुरा हो । बरु यसले तिमी आमा बन्न सक्षम छौं भन्ने संकेत दिएको हो । त्यसैले यसलाई गलत भन्दा पनि आत्मसात् गर्दै यो मेरा लागि शुभ हो भन्ने सन्देश दिनको लागि हामीले महिनावारी माला बनाएका हौं ।
यस्तो पोषण र महिनावारी माला बनाउने अवधारणाको विकास कसरी भयो ?
शिक्षित महिलाहरूले त पढेर कुपोषणबारे जानकारी लिनुहुन्छ । अशिक्षित महिलाहरू अझै पनि त्यो कुरामा पछाडि हुनुहुन्छ । त्यसबारे जानकारी नभएकाले हाम्रो पहिलो उद्देश्य भनेको शिक्षित अशिक्षित महिला दुवैलाई हुनसक्ने सरल, बुझिने खालको हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ बनाएका थियौं ।
त्यो बनाउने क्रममा बच्चाको पाखुरा नाप्नको लागि प्रयोग गरिने ‘मुआटेप’ जसमा हरियो, पहेलो र रातो गरी तीन किसिमको रंग प्रयोग गरिएको हुन्छ । बच्चाको पाखुरा नाप्दा हरियो रंग आयो भने ऊ स्वस्थ छ भन्ने बुझिन्छ । पाखुरा नाप्दा पहेला आयो भने मध्यम खालको कुपोषण भएको संकेत गर्छ । भने रातो रंग आयो भने बच्चा एकदमै कुपोषित छ भन्ने जनाउ दिन्छ ।
पब्लिक हेल्थ पढ्दा यो सिस्टम समुदायमा प्रयोग गरेकी थिएँ । त्यो प्रयोग गर्दा अशिक्षित आमाहरूले पनि रातो देख्नासाथ यो डेन्जरको संकेत हो भन्ने बुझ्नुहुन्थ्यो । त्यसैले रंगसँग मानिसहरूले यसरी जानकारी राख्न सक्ने रहेछन् ।
त्यस्तो देखिसकेपछि अब खानेकुरालाई पनि यस्तै रंगसँग सम्बन्ध राख्नुपर्यो भन्ने अवधारणा आयो । समुदायमै भएको खानेकुरालाई प्रमोट गरेर यो माला बनाएका हौं । विशषगरी सरकारकै हरेक बार खाना चार भन्ने नारा अनुसार नै बनाएका हौं ।
सुरुवातमा यसको प्रयोग कसरी गर्नुभयो ?
काठमाडौंकै नजिकको समुदाय लुभुमा यस्तो समस्या देखेका थियौं । त्यो ठाउँलाई बत्तीमुनिको अँध्यारो ठाउँ पनि भनिन्थ्यो । त्यसपछि हामीले त्यहिबाट सुरुवात गर्यो । त्यहाँको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा खोप लगाउन आउने आमाहरूलाई काउन्सिलिङ गरेर माला दिएका थियौं । हामीले सरकारी निकायसँगै सहकार्य गरेर अगाडि बढ्दै आएका छौं ।
अहिलेसम्म ८ वटा जिल्लाका विभिन्न गाउँहरूमा यस्ता कार्यक्रम भइरहेका छन् ।
तपाई काठमाडौंमा जन्मे हुर्केेको मान्छे । कसरी यो क्षेत्रमा लाग्नुभयो ?
यस विषयमा सानैदेखि मेरो लगाव थियो । तर, भविष्यमा यही काम गर्छु । यही नै बन्छु भन्ने थिएन । पढाइ सकाएपछि स्थानीय गैरसरकारी संस्थामा काम गर्थे । त्यहाँ आवद्ध हुँदा विभिन्न समाजबारे बुझ्ने मौका पाएकी थिएँ । मेरो पढाइले पनि समाजमा गएर समाजसँग नजिक हुने मौका दियो ।
यस्ता मार्मिक घटनाहरू देखेँ । म आफैं एउटा किशोरी, युवा भएको नाताले म जस्तै किशोरीहरूको रियालिटी अर्कै थियो । त्यो खालको विभेद थियो । म काठमाडौंमा हुर्किएँ । मेरो बुबा र आमा दुवै शिक्षित हुनुहन्छ । मेरो सबै आवश्यकताहरू पूरा गरिन्थ्यो । भोक लाग्दा पोसिलो खाने कुरा हुन्थ्यो । विरामी पर्दा तत्कालै उपचार गरिन्थ्यो । तर म गएको एउटा गाउँको महिलाको उदाहरण दिन्छु ।
म गएको गाउँ पर्वत जिल्लाको आर्थर गाउँ । मजस्तै एउटा किशोरी । अहिले १४ वर्षको हुनुभयो । उहाँको बिहे भइसक्यो । उहाँ आफैं कुपोषित हुनुहन्छ । त्यसमा गर्भवती हुनुभयो । अब उहाँबाट जन्मिने बच्चा कस्तो हुन्छ ? उहाँलाई विवाह गर्ने इच्छा थिएन । तर समाजमा छोरी भनेको पराइ घर जाने हो भनेर विवाह गर्न बाध्य बनाइयो । अब उहाँबाट जन्मिने बच्चा कुपोषित हुने अवस्था आइसक्यो । ती किशोरीको आमा पनि स्कुल जाँदा जाँदै पढाई छाडेर विवाह गर्नुभएको रहेछ ।
उहाँ पनि कुपोषित हुनुहुथ्यो भने उहाँबाट जन्मिएकी ती छोरी कस्तो थियो होला ? यो कुपोषणको चक्र चलिरहथ्यो । स्वास्थ्य संस्था जान पनि एक घण्टा हिड्नुपर्थ्यो । जहाँ उहाँले चाहेको बेला सबै औषधि उपलब्ध थिएनन् । भनेपछि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा लिनको लागि गर्नुपर्ने संघर्ष, सफा खानेपानी खानलाई गर्नुपर्ने संघर्ष, दैनिक पोषणयुक्त खानेकुरा खानलाई गर्नुपर्ने संघर्ष । अब मेरो र उहाँहरूको तुलना गर्दा आकाश पतालको फरक थियो । अझै पनि यो समस्या छ । विभेदबारे जान्ने मौका नजिकबाट पाएकाले पनि यहि क्षेत्रमा काम गर्छु भन्ने प्रेरणा मिलेको थियो ।
नेपालकी बोनिता शर्मा विश्वका प्रभावशाली सय महिलाको सूचीमा
BBC, bonita sharma, कुपोषण, कुपोषित, गर्भवती, पोषण कार्ड, पोषणमाला, पोषणयुक्त, बीबीसी, बोनिता शर्मा, महिनावारी, महिनावारी माला, महिला
Prevभाइटीकाका लागि १३ गते सार्वजनिक बिदा दिन प्रधानमन्त्री सकारात्मक
चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणः भ्रम र यथार्थNext